DivvyHQ: Drafitra avo lenta momba ny votoatiny sy workflow | Martech Zone
Raha miasa amin'ny orinasa orinasa ianao, ny fandrindrana ny atiny sy ny fanatanterahana izany no ivon'ny tetikadinao amin'ny varotra ankapobeny. Ny fanamby dia ny fitantanana hevitra, enti-miasa, andraikitra ary famerenana ny satan'ny famokarana amin'ny ankapobeny. DivvyHQNy sehatr'asa dia manome ny fitaovana ilaina rehetra manomboka amin'ny filamatra ka hatramin'ny fanatanterahana. Ny sehatra dia natao ho an'ny famoahana atiny sy haino aman-jery sosialy.
DivvyHQ dia fitaovana miasa mifototra amin'ny rahona, drafitra votoatiny ary famokarana fiasa famokarana namboarina hanampiana ireo mpivarotra sy mpamokatra atiny hanana / hijanona ho voalamina ary hanatanteraka am-pahombiazana ireo hetsika ara-barotra mitaky be pitsiny sy sarotra. Ny fiasa tsy manam-paharoa an'ny Divvy dia manambatra kalandrie mifototra amin'ny tranonkala, fitantanana atiny sy fiaraha-miasa an-tserasera hanampiana ireo ekipa atiny manerantany hisambotra hevitra momba ny atiny, hanomezana sy hanoratany tetikasa atiny, hamokarana karazana atiny ary hijanona eo ambonin'ny fe-potoana famokarana.
Fomba fiasa DivvyHQ
Dashboard - Makà sary fohy momba izay tokony hatao, inona no vita ary inona no ataon'ny ekipanao amin'izao fotoana izao.
Alimanaka zaraina tsy voafetra - Alimanaka zaraina marobe araka izay ilainao mba hitazomana ny tontolonao hifandamina sy ny ekipanao amin'ny pejy iray ihany.
Fitantanana workflow mora - Tsy maninona ny haben'ny ekipanao, na ny fahasarotan'ny fizotry ny famokarana ataonao, ny Divvy dia hanampy anao hamokatra, hankatoavina ary hamoahana amin'ny fomba mahomby ny atiny.
Izay karazana atiny - Mamokatra mihoatra ny atiny nomerika ianao. Mampiasà Divvy hanampy amin'ny fandrafetana sy famokarana karazana atiny ilainao hitantanana.
Votoatiny / Famoahana ara-tsosialy - Esory ny fitsangantsanganana an-tsehatra ary alefaho mora foana ny votoatin'ny sosialy sy ny sary mivantana amin'ny Facebook, Twitter, ary ny hafa.
Apetraho ny hevitrao tsara - Iza no mahalala hoe rahoviana ary avy aiza no mety hisy ny hevitra momba ny atiny. Ny Divvy Parking Lot dia mamela ny ekipanao hitahiry ny heviny mandra-pahatongan'ny fivorian'ny drafitra atiny manaraka.
Security - Ataovy azo antoka ny votoatinao miaraka amin'ireo fepetra fiarovana napetrak'i DivvyHQ.
Azonao atao ny manandrana ny DivvyHQ maimaim-poana amin'ny fanoratana anarana ao amin'ny tranokalan'izy ireo.
Tags: fanendrena atinykalandrie atinyfiaraha-miasa amin'ny atinyhevitra momba ny votoatyfikorianan'ny votoatyfandaharam-potoana atinydivvyhq